Ndi Youtube Na-egbu TV? | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 3, 2011 Tọzdee, Nọvemba 3, 2011 Douglas Karr
Onwe m, echere m na anyị ga-enwe televishọn n'oge ndụ m niile na ụfọdụ. N'adịghị ka nke a infographic, Ekwetaghị m na telivishọn bụ ihe nwụrụ anwụ… M nnọọ na-eche na ọ na-aga site na mgbanwe. Na narị ụzọ iri, ọbịbịa nke Tivo na nnukwu bandwidth, kedu na-afụ ụfụ telivishọn bụ mmetụta na mkpọsa ngwá ahịa… abụghị n'ezie Youtube. Na infographic dị n'okpuru na-ekwu maka ọnụọgụ òkè Google, mana nleghara anya igosi na Youtube anaghị enweta ego ọ bụla, ma!
N'ezie, ihe na-ejide, bụ ikike maka azụmaahịa ịzụlite mgbasa ozi vidiyo dị ọnụ ala. Mgbasa ozi televishọn nwere ike ịdị elu karịa $ 60,000 iji mepụta. Ọ bụghịkwa ọzọ! Nwere ike iji igwefoto HD na ekwentị gị yana sọftụwia edezi n'efu iji mepụta mkpọsa ngwa ahịa na obere ọnụọgụ ego. Yabụ advertising mgbasa ozi vidiyo ga-ejide.
Banyere Youtube na Youtube Television ha abụọ na-agbakọ. GoogleTV, AppleTV na ndị ọzọ nwere Youtube ngwa. Ndị na-enye USB dị ka Comcast ma ọ bụ U-Amaokwu iyi vidiyo dịka ịntanetị. Enwere njikọta nke teknụzụ abụọ a na - eme - ọ masịrị m!
Infographic site na Freemake, onye mpako di elu nke Ihe Ntụgharị Youtube
Tags: telivishọntvvideo mgbasa oziyoutube
Nov 4, 2011 na 4:08 PM
Ozi oma. Ndị na-emepụta ihe na-ekpuchi onwe ha. Ndị mmadụ chọrọ ịhụ ndị mmadụ.
Nov 4, 2011 na 4:17 PM
Nnukwu ihe, Pịa! Ekwenyere m na ndị folks adịghị akpali site na vidiyo na-egbukepụ egbukepụ na-egbukepụ egbukepụ ọzọ… ndị mmadụ, ezigbo ozi na-emeri n'ihi ezi obi ha na ikike ijikọ onwe ha.
Isiokwu na-adọrọ mmasị nke ukwuu! M onwe m kwa ekwenyeghi na Youtube na-egbu TV, echere m na TV na-egbu onwe ya! Ọtụtụ ihe ndị na-egosi kuki na-egosi, mgbasa ozi, nhazi oge, na ihe niile na-eme ihe ọjọọ na ọnụ ahịa dị oke ọnụ nke anyị na-enweghị ike imeli na akụnụba taa!